HomeWararka CiyaarahaManchester United 1-0 West Ham United: Rashford oo Red Devils ka Caawiyay guul ay ka gaartay Hammers
January 23, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska, Warka Xiisaha Leh 0
Marcus Rashford ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxdiisa Manchester United kadib markii ay 1-0 ku garaacday kooxda Hammers kulan ka dhacay Old Trafford.
kulanka ayaa u muuqday mid ku dhammaanaya gool la’aan ilaa Edinson Cavani uu karoos joog hoose ah dhanka bidix ka soo karoosay waxana dhameestiray Rashford oo isna bedel ku soo galay ciyaarta Daqiiqadii 90 + 3aad ayuuna goolka yimid.
Cavani ayaa u muuqday mid offside ku jiray markii uu baas ka soo qaatay Anthony Martial, laakiin dib u eegis VAR ayaa u ogolaatay in goolka uu saxyahay taasoo ka dhigtay in Hammers ay niyad jabto.
Natiijadu waxay la macno tahay in maamulaha West Ham David Moyes uusan haatan badin kulan marti ah oo uu kaga hortagayo kooxdiisii ​​hore 15 isku day (L11 D4).
Saddexdan dhibcood waxay Manchester United siiyeen fursad ay si ku-meelgaadh ah ugu soo cidhiidhsatay kaalinta afraad oo ay sii hayn doonto illaa inta ay guulo keenayaan Arsenal iyo Tottenham oo Axadda la kala ciyaaraya Chelsea iyo Burnley.
Manchester United waxay Jimcaha la ciyaari dootnaa Middlesbrough wareegga afraad ee tartanka FA Cup, hase yeeshee West Ham ayaa kulankeeda ugu soo horreeya ciyaari doonta February 5 oo ay ballansan yihiin kooxda Kidderminster Harriers oo heerarka hoose ee Ingiriiska ah.